China Service Over Counter Supermarket Refrigerator CSS-2011SGA orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Nenwell
Sehatra fivarotana lehibe
Service Over Counter Supermarket Refrigerator CSS-2011SGA
Tena zava-dehibe ny fahitana servisy amin'ny mpanohitra mora azo ovaina amin'ny toerana misy ary koa mampiseho ny filàna. Nenwell dia manome servisy marobe amin'ny vata fampangatsiahana mangatsiaka mifanaraka amin'ny tanjona marobe ary azo tsapain-tanana amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny fisehoana delestazy, ny vata fampangatsiahana hena ary ny kabinin'ny hena sitrana no tena mampiavaka an'io sokajy io. Manana fivarotana mofomamy ve ianao? Izahay dia mikendry fampisehoana hena anaty vata fampangatsiahana samihafa miaraka amin'ny fahafaha-manaingo azy ireo. Ny sasany amin'ireo vata fampangatsiahana vata fampangatsiahana dia azo ampiasaina ho toy ny kabinetran'ny serivisy. Ny vokatra rehetra dia mifameno tanteraka amin'ny fomba fivarotana sy efitrano misy. Ho an'ny takelaka tsirairay dia misy tabilao loko misy: safidio ny famaranana akaiky indrindra ny fomban'ny fivarotanao. Tery ve ny fivarotanao? Tsy olana izany: manana ny vahaolana ho anao i Nenwell. Manompoa kaontera amin'ny alalàn'ny lalina mba hametrahana azy ireo any amin'ny magazay kely. Ho an'ny sasany amin'izy ireo dia misy vera miolakolaka na mahitsy. Jereo daholo ny fisehoan'ny vata fampangatsiahana nataon'i Nenwell ary omeo fahafaham-po ny filanao fivarotana rehetra.
Ity dia latabatra misy servisy misy vera fananganana mahitsy, ho fampisehoana hena, vokatra vita amin'ny ronono, vokatra vaovao sy feno entana mialoha, ny sandan'ny sandaly lafo vidy lafo indrindra ho an'ny mofo sandwich sy ny vokatra deli. Ny kabinetra dia misy ho an'ny rehetra mirehareha anaty vata fampangatsiahana, fitoeran-java-baravarankely misy ambaratonga ary asa ambony miverina vy.
Teo aloha: Multideck plug amin'ny fampiratiana legioma amin'ny voankazo lehibe BLF-1080
Manaraka: Vata fampangatsiahana hafanana indroa nosy DII-240
• Toa tsara sy kanto ny fisehoana, tsara ny vokarin'ny fampirantiana
• Vata fampangatsiahana R404a / R744.
• Fihenan'ny tsingerina ivelan'ny tsingerina, mampihena ny fanjifana angovo.
• Mampiasa evaporator mahomby be ny vokatra, mampitombo ny tahan'ny fifanakalozana hafanana, ny lehibe ny herin'ny vata fampangatsiahana.
• Misy valva solenoid isaky ny kabinetra.
Mametraka sivana eo alohan'ny valizy solenoid izahay mba hampihenana ny fahasarotana sy ny vanim-potoana fametrahana, ferana ny mety hisakanan'ny loto.
• Ny mpankafy fahombiazana avo lenta dia azo safidiana arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
• Ny firafitry ny fitaratra manafoana lohataona paompy rivotra, azo ajanona ihany koa ny vera zoro.izany famoronana vita ho an'ny retuel sy ny asa isan'andro hafa.
Dimension unit (W / D / H mm)
1875 * 1103 * 1145
Fonosana refy (W / D / H mm)
2075 * 1250 * 1280
Volume mahomby (L)
Faritra fampisehoana (㎡)
Evaporator Fans Brand
40 GP Mametaka kontainera
2º C ~ 8º C Fivarotam-panafody mediteraly kely V ...
Fangatahana hafanana hafanana roa nosy DI ...
-86 ° C Fitaovana mafana mahomby amin'ny hafanana ambany
200L Varavarana fivarotana lohan-tratra misokatra ho an'ny varotra ...
Tel: 86 - 757 - 86309994
© Copyright - 2010 - 2021: Zo rehetra voatokana.